सानै उमेरमा विवाह गरेका मोदी किन लुकाउँछन् आफ्नी श्रीमती? सबैलाई चकित पार्ने यस्तो छ कारण ! – Jagaran Nepal
भारतका कुनाकुनासम्म, उसका छिमेकीहरु तथा विश्वका शक्ति राष्ट्रहरुको राजनीतिक वृत्तमा समेत मोदीको नाम नसुन्ने सायदै कम होलान्।
मोदी जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गान्धी र मनमोहन सिंहपछि भारतीय इतिहासमा चौथो सबैभन्दा लामो अवधि सेवा गर्ने प्रधानमन्त्री हुन्।
नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ को मे २६ मा भारतीय १४ औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पहिलो कार्यकाल सुरू गरेका थिए। उनको दोस्रो कार्यकाल ३० मे २०१९ मा सुरू भएको हो।